June 28, 2011 – democracy for burma
On June 28, 2011 By Burma Myanmar newsIn AseanLeaveacomment
စစ်တပ်ရိက္ခာများကို ရွာသားအယောက် ၅၀ ထမ်းပေးရ -Ktimes
On June 28, 2011 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
ကရင်နီပြည်နယ် ရှားတောမြို့နယ်၌ အခြေစိုက်သော မြန်မာစစ်တပ် ခမရ ၅၇၅ သည် ဇွန်လ ၁၈ နှင့် ၁၉ ရက်နေ့အတွင်းက ရွာသားအယောက် ၅၀ ကို တပ်ရိက္ခာများ ထမ်းပို့ခိုင်းစေခဲ့သည်ဟု ကရင်နီ လူမှုကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့က ပြောသည်။
ခမရ ၅၇၅ သည် ရှားတောမြို့နယ် တငူးဆို (ထင်းရှုးတောင်)၌ အခြေစိုက်ထားသော ခမရ ၃၃၂ နှင့် ပြီးခဲ့သည့် အပတ်က တပ်လဲလှည်၍ တပ်စခန်း အနီးရှိ ဒေါတနော၊ ဒေါဝယ်ရော၊ ဒေါမူးလဲ၊ တနောင်ကလူးနှင့် တရီးဒါး ကျေးရွာတို့ကို တရွာလျှင် ရွာသား ၁၀ ယောက်စီ ဆင့်ခေါ်ပြီး ၎င်းတို့ တပ်ရိက္ခာများကို သွားရောက်ထမ်းစေခိုင်းကာ တပ်စခန်းသို့ အရောက်ပို့ဆောင်ခိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်ဟု လူမှုကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့မှ ခူးညေးရယ်က ပြောသည်။
ကရင်နီပြည်နယ် သံလွင်မြစ် အရှေ့ဘက်ကမ်းဒေသမှ မြန်မာစစ်တပ် တပ်စခန်း တခု
စစ်တပ် ရိက္ခာများကို လွိုင်ကော်မြို့မှ စစ်တပ် ကားများဖြင့် တင်ဆောင်လာပြီး ရှားတောမြို့နယ် ဒေါးမူးမာကျေးရွာ အနီးရှိ မြန်မာစစ်တပ် တပ်စခန်းတွင် ချထားကြောင်း၊ ရွာသားများသည် ထိုစစ်တပ်ရိက္ခာများကို ဒေါမူးမာ တပ်စခန်းမှ တရိဒါးကျေးရွာသို့ ထမ်းပို့သွားရကြောင်း၊ တရိဒါးကျေးရွာမှတင့် မြန်မာစစ်တပ် ခမရ ၅၇၅ တပ်စခန်းသို့ ပို့ဆောင်သွားရကြောင်း ဆိုသည်။
ရွာသားများ ထမ်းပို့ပေးရသော စစ်တပ် ရိက္ခာများသည် ဆန်၊ သကြား၊ နိုးဗူး၊ ငါးဗူး၊ အမဲဗူးနှင့် အခြားရိက္ခာများ ပါဝင်သည်ဟု ခူးညေးရယ်က ဆက်ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီလ ၄ ရက်နေ့တွင်လည်း ရှားတောမြို့နယ် တငူးဆို၌ ယခင် အခြေစိုက်ထားသော ခမရ ၃၃၂ သည် ကျပ်ငွေ ၉၉၆၀၀ တန်ဖိုး ရှိသော ၎င်းတို့ တပ်ရိက္ခာများကို ရွာသားများအား သွားရောက်ထမ်းခိုင်း၍ တပ်ရိက္ခာများကို လမ်းခရီးစဉ်တွင် ကရင်နီတပ်မတော်မှ ရွာသားများထံ ဖြတ်တောက်ယူခဲ့သည်။
ခမရ ၃၃၂ နှင့် တပ်လဲလှည်ပြီး ရှားတောမြို့နယ် တငူးဆို၌ ယခု လာရောက်အခြေစိုက်သော ခမရ ၅၇၅ သည် ရှမ်းပြည်နယ် မိုင်းပန်မြို့နယ်၌ အခြေစိုက်ထားသော စစ်ဆင်ရေး ကွပ်ကဲမှု စစ်ဌာနချုပ် (စကခ) ၁၇ ၏ လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း ဖြစ်သည်။
On June 28, 2011 June 28, 2011 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Jaloon Htaw – In response to the USDP government’s order to reform the national human rights body or Human Rights Commission, Director of Human Rights Education Institute of Burma (HREIB) Aung Myo Min said, “If such an organization is formed, the government ministers or officials should not be involved, and it must be independent.”
Kachin state, where human right violations is serious ( Photo: KWAT )
Aung Myo Min said, “The Human Rights Commission hasagreat responsibility to say if the government is violating human rights, and all human rights laws must be regulated clearly. Now, if the government officials are violating the laws, the officials themselves have to monitor and point out violations. It is impossible, and totally against international standards. This Human Rights body must be formed with independent human rights experts.” Continue reading “BURMA:Government Officials Must Not Be Involved When Human Rights Body Forms” →
MAH MyathHein- ShweMann- Rpt to NPT on Difficulty if Continue This Way-Attacking Ethncis Will Close Borders
June_27_Breaking News: Gen MinAungHlaing under arrest -ordered by Prsdnt TheinSein NPT pushing for release
Bond Girl,Actress Yeoh blacklisted, deported from Myanmar,Burma
Dollar Kyat Market-VOA Clip